I-Take Of Semalt KwiWebhsayithi Yokuqhawula: Yintoni Okufuneka Uyazi
Ukufumana unxibelelwano oluvela kubathengi bakho abanokuba ngcono kunokuba uthathe izixhumanisikusuka kumashishini akho. Akukho mfuneko yokwenkqiswa xa umqhubi wakho ephuma ngaphandle kwimiqathango. Ukuthatha iindlela zakho ze-SEOkwelinye nqanaba liya kukufumana kwisikhundla sakho esifanelekileyo. Ukudala umxholo omtsha kunye nokunika umgca olungeleyo weenkonzo kunye nemveliso yakhoabakhuphisanayo abayi kunceda.
Igor Gamanenko, ingcali ehamba phambili Semalt IiNkonzo zeDivithali, ichaza ubunzulu bokungena kwi-website kunye nokukhuselwa.
Namhlanje, i-algorithm yokukhangela yeGoogle inendlela yokufumanisa umxholo okhutshiwe kunye kunyeukuwahlawulisa. Awufuni ukutywinjwa ngu-Google ngenxa yezinto ezingekho phantsi - covert surveillance cameras. Ngaphambi kokuba wenze i-SEO, kubalulekile ukuba ufunde izinto ezisisekoukuphepha ukuhlangabezana neengxaki kwikhankaso lakho le-SEO. Ngokomzekelo, iziganeko zokuhlaselwa kwiwebhusayithi kunye nokukhwabanisa ngoku ziqhelekileyo. Kuyinkathazoukuxhaswa ngumntu onobungozi obunobungozi, nokulahlekelwa ukulawulwa kwekhuseleko lakho kwiwebhusayithi.
Emuva ngo-2014, ingxelo ikhululwe ukuba kukho ii-website ezili-1 ezigidii-intanethi. Inani elihle lekhosi. Ngenxa yobuninzi, inani elibhalisiweyo lewebhu liye lahla ngokukhawuleza kwaye lizinzile ngo-2015 ngokushaya994 yezigidi. Inani elincinci labathengisi bemveliso liphuma kwi-SEO nyanga zonke ngenxa yokuhlaselwa kwewebhusayithi. Phantse i-1% yewebhusayithi isulelekilekwaye zikhohlakele ngenxa yokungabikho koMqondiso weCompromise. Oku kufana nezigidi ezili-8 zewebhu eziphuma kwishishini ngenxa yesigqubuthelo.
Ngokuyininzi, iiwebhsayithi ziyakwazi ukuhlaselwa kwaye zikhulelwe ngenxa yezinto ezilandelayo:
Ukufumaneka kwamashishini angaphandle
Ukufumana ulawulo ukusuka kumaqela ahlukeneyo
Ukulungiswa kweVs Forensics
I-Forensics ibekwe kwi-SEO ixesha elide.indlela okwenzeka ngayo ukukhwabanisa kwenzeka, ngaphezu koko, ngubani owenzela ukukhwabanisa. Ukulungiswa, ngakolunye uhlangothi, kubandakanya ukuba izifo ziyakwenzeka njanizisuswe. Ukulungiswa akukwazi ukuyenza ngaphandle kweengxelo ze-forensic and vice-versa. Ukulungiswa okufanelekileyo akukwazi ukufakwa endaweni ngaphandle kokuba khonaeziyimpumelelo.
Amashishini amakhulu akakwazi ukwenza ngaphandle kweengxelo zeemviwo. Ikhuseleko lakho lewebhu libaluleke kakhulu.Nazi izizathu ezibonisa ukuba kutheni ufuna i-forensics yakho kwintlangano yokukhangela nokukhuselwa kwewebhusayithi yakho.
Xa kuthengiswa, ufuna i-forensics ukusombulula iinkqubo zakho ze-IR.
Ukuba yi-PCI ehambelanayo, ngokuqinisekileyo awukwazi ukuyenza ngaphandle kweengxelo ze-forensics.
Umnqweno wokuqonda ukuba kwenzeke njani ukunyaniseka.
Yeka indlela ukhuseleko lwewebhusayithi elungile ngayo